Tsalela Us: + 86-757-81285488
Uhlolwe Frequency Low
Uhlolwe High Frequency
Yokubeka Mountable UPS
Panel Monocrystalline Solar
Panel Polycrystalline Solar
Cycle Deep Gel Battery
Kwi-grid Solar System
Q: Yintoni na womxhuzulane ethile, yaye kutheni lungumba obalulekileyo?
A: sulphuric acid akukho ngaphezu iikhemikhali ichithwe ibe isisombululo yamanzi esekelwe. Amanzi Pure Yek abe womxhuzulane ethile, okanye ubunzima 1,000. Xa ukunyibilika imichiza kuloo manzi, isisombululo kuba nzima. Battery electrolyte sisisombululo wamanzi kunye sulphuric acid kunye benokundileka ethile 1,265 ukuba iibhetri amanzi futhi malunga 1,310 kuba itywiniwe (wendele iglasi emethini) iibhetri. Nto leyo ethetha ukuba AGM iibhetri, isicombululo asidi amaxesha heaver 1,310 ngaphezu amanzi kuphela. Ubunzulu ethile lingaba nokulinganiswa lula kunye nokusetyenziswa hydrometer kwebhetri, akukho ngaphezu kokuba ityhubhu kunye esijingayo ukukala ngaphakathi. Uphakamile ubunzulu ngqo umxube ityhubhu, kungona edadayo khwela kwi isisombululo. Kanye njengokuba wena sisemanzini amanzi amtyuba ngaphezu acocekileyo, ityuwa ibe kwemichiza unyityilikiswa emanzini. Ngako oko wathi, njengokuba ibhetri luthe alahlwa, umchiza uyapheliswa linamathela amacwecwe kukhokela. Xa ibhetri, ibuyisela emanzini. Xa oku uba lukhuni Emacebeni, ibizwa ngokuba sulfation.
Q: Yeyiphi UPS ubungakanani ekufuneka bakhethe?
Okokuqala, kufuneka amisele iimfuno ngamandla izixhobo yakho ngolu hlobo lulandelayo:
Baqinisekise ukuba izixhobo eziplagwe ibhetri zokuphuma amandla-kunikwa ayidluli amandla unit UPS kaThixo rated. Ukuba kwamandla unit rated na ngaphaya, i imeko eninzi zingenzeka kwaye ukuba iyunithi UPS ukuvala okanye umaphuli yesekethe ukuzikhubekisa.
Ukuba iimfuno ngamandla izixhobo zakho zidweliswe kwiiyunithi ngaphandle Volt-Amps (VA), ukuguqula Watts (W) okanye Amps (A) zibe VA ngokwenza ubalo ngezantsi. Qaphela: Le equation ngezantsi ubala kuphela inani eliphezulu VA ukuba izixhobo angasebenzisa, into ezisetyenziswa yi izixhobo ngalo naliphi na ixesha. Abasebenzisi kufuneka ukuba iimfuno yokusebenzisa ukuba malunga nama-60% yexabiso ngezantsi.
Okwesibini, uqikelelo iimfuno namandla ngolu hlobo lulandelayo:
_______ Watts (W) x 2.0 = _______ VA okanye _______ Amps (A) x 230 = _______ VA
Dibanisa iitotali ukuya zonke iziqwenga izixhobo pinda oku iyonke ngo 0.6 ukubala iimfuno ezizizo. Zininzi izinto enokuchaphazela ubungakanani bamandla nkqubo khompyutha yakho iza kufuna. Umthwalo iyonke ukuba uza ngokubeka phezu zokuphuma ngebhetri enikwe kufuneka ingadluli 80% umthamo wendawo Unit.
Q: Curabitur ultrices commodo magna?
A: Home nje umbhalo dummy okushicilela kunye nokushicilela shishino. Home iye umbhalo dummy standard zolu shishino ukususela 1500, xa umshicileli engaziwayo wathabatha kuhamba lohlobo kunye Home nje umbhalo dummy okushicilela kunye nokushicilela shishino. Home iye umbhalo dummy standard zolu shishino ukususela 1500, xa umshicileli engaziwayo wathabatha kuhamba lohlobo kunye Home nje umbhalo dummy okushicilela kunye nokushicilela shishino. Home iye umbhalo dummy standard zolu shishino ukususela 1500, xa umshicileli engaziwayo wathabatha kuhamba lohlobo kunye ...
Q: Yintoni INVERTER AMANDLA?
An Inverter uyakwazi ukuguqula ombane ibhetri (DC) kwi alternating current (AC) umz 220V AC / 50Hz. Oku kunokufikelelwa ngeendlela ezininzi. Oku kunokufikelelwa ngeendlela ezininzi ngokuxhomekeke ithekhinoloji ekhoyo kunye neenjongo ke lowo wengcibi yokuluka. Ngokomthetho sibe iintlobo ezintathu ezinkulu inverters ngamandla, ezizezi: wave Square, Modified Square Wave kunye Sine Wave.
Iinkcukacha ezithe xaxe ukufunda Prostar inverter:
Q: Square Wave Inverters
Imveliso yezi inverters kukho ombane sikwere 220V AC / 50Hz. Kulawulwe ombane yemveliso idla engachananga kakhulu yaye ngokuxhomekeke ngqo kwi ombane igalelo kunye nomthwalo kwimveliso. Square Wave Inverters babe ukusebenza eliphezulu kakhulu imithwalo kuphela resistive (cos Izifudumezi phi = 1, umzekelo). Tshintsha izinto imo lwamandla ngathi uchwetheze kwiikhompyutha (njengoko umthwalo) unako kwakhona ukunika iziphumo ezilungileyo ukuba imimiselo EMI ziyafikeleleka yi inverter.
Imithwalo ukuba babe neengxaki xa isetyenziswe square inverters wave:
Naziphi na imithwalo cos-phi ngaphandle kwe-1 (imithwalo ezenza okanye capacitive, umzekelo, iifeni, iifriji, nezibane Flourescent kunye ingakwazi nokuginya)
izibane yokonga amandla kunye neminye imithwalo kunye Izahluli capacitive ombane. iincopho zangoku okubangelwa kumathambeka ombane eweni kakhulu kunokubangela Ukuncitshiswa kakhulu kwexesha ubomi babo.
Ukuphazamisa (wachuba iindawo ezimhlophe njl) kunye nesandi ezirekhodiweyo Hi-Fi, ividiyo okanye TV iiyunithi.
Imithwalo ulawulo sigaba, elektroniki olubuthathaka.
Iimoto zombane, kukho iingxaki ezinkulu ezimbini: Motors esebenzayo ashushu kakhulu ngenxa iincopho yangoku ezibangelwa wave isikwere, iibheringi motor ziguge ngokukhawuleza ngenxa yokungafani torque.
Q: Inverters PWM, Modified Square Wave Inverters, lungelelanisiweyo Sine Wave Inverters etc
Zonke ezi inverters bafana kumathambeka ombane usiko square inverters otshangatshangiswayo. Igama elithi "sine" yaziswa kuphela ngabantu zokuthengisa. Uncedo kuphela ezi inverters na ummiselo imveliso ombane ngokuzimeleyo input ombane kunye umthwalo.
Q: OLUNYULU sine igagasi INVERTERS
Lo bugcisa isimo ubuciko kangangeminyaka eliqela ngoku. Akukho sizathu sokuba nayiphi na obunye ubugcisa inverter ngaphandle ixabiso. Iliza olunyulu sine i amaza 'yendalo' njengoko wadala yi naliphi na isikhululo samandla ayafumaneka kwi sokethi esedongeni ekhaya.
Naziphi na iingcingo Umthwalo EZIFUMANEKAYO zadalwa ukusetyenziswa sine igagasi UMBANE!
Inverters wave sine izinto ezinobunzima ukwakha oko kubangele iindleko zokuvelisa landa. Imilo wave sine ukuba kuhlelwe yi filter PWM ezongezelelweyo imveliso ye inverter. Ukusetyenziswa Imile engaphezulwana nje kancinane kune square inverters amaza. Uncedo inkulu sifumaneka kahle eliphezulu nobunzima ukusebenza simahla phantse naluphi na umthwalo.
IINKCUKACHA AMANYE ZOBUGCISA (ISISHWANKATHELO):
50 / 60Hz iteknoloji: kude kunye ombane inyathelo phakathi kwicala DC ne AC siyifumana transformers zentsimbi. umgangatho wokhuseleko eliphezulu kakhulu. Ukunyuka ubomi ngenxa Ukwehla semiconductors. Ibhetri isebenza yokugcina kwemisinga izidubuli. Le Ububi kuphela ubunzima eliphezulu transformers yentsimbi.
aqhelelkileyo technology: Le yunithi ukusebenzisa sombane HF for step bodwa / ombane. Ukunciphisa bubunzima kodwa inani ungamalungu elektroniki. Bongeka iyafana 50/60 ubugcisa Hz imithwalo resistive kodwa akukho ithuba ukusebenzisa ibhetri njengoko yokugcina kwemisinga ezenza. Imithwalo ngengxa phi eliphantsi kungabangela iingxaki.
inverters rhoqo ngaphandle bodwa phakathi DC / AC: isetyenziswe kuphela kwiimveliso cheap. Akukhuthazwa ngenxa yezizathu zokhuseleko, akukho ukuya technology umhla.
Q: Yintoni na Inverter / Solar Battery?
Inverter okanye ibhetri Solar njengayo nayiphi na ibhetri intwana yesixhobo ugcino lwamandla ukuba isetyenziswe xa kuyimfuneko. Ukuza kuthi ga ngoku i ibhetri inverter okanye ibhetri solar kufuneka ukukwazi ukuba lihlasele kwaye ugcine isigxina ngokukhawuleza kakhulu. nam ndiya kuba nako ukubahlangula intlawulo njengoko kuyimfuneko ngexesha nokusetyenziswa.
Types of Iibhetri:
Kukho iintlobo ezininzi iibhetri, kodwa sikwazi ukuchaza kuphela iindidi ezinkulu ngokusekelwe kwisihloko wethu apha. Kukho ngokusisiseko iintlobo ezimbini: Umjikelo Deep kunye nomjikelo nzulu.
6. iibhetri Cycle Deep kufuneka iiseli ezimbalwa ziyatyeba. Lo msebenzi ulunika kwinkcaso ukunikezela sentlawulo inverter kangangoko enkulu, ukuya kwi-60% okanye 80% iSebe obhobhozayo ngaphandle isiphako Emacebeni okanye iiseli.
7. iibhetri Umjikelo nzulu okanye iibhetri ibambelele babe amanani aphezulu zizixwexwe okanye iiseli kunye ukukwazi ukwenza kunye lwangoku eliphezulu ixesha elifutshane. Amanzi elide kuya kubangela iiseli kumonakalo. Neebhetri Umjikelo alusoloko kakhulu lokuqalisa imoto.
Q: Indlela ukukhetha ILUNGELO Battery?
Iibhetri for inverter okanye ukusetyenziswa amandla elanga aziswa kunakho 100ah.
Inverters kufuneka oqhutywa iibhetri ngobukhulu ezifanelekileyo. I battery kufuneka umjikelo isiqinisekiso. Ngokubanzi, ngokuba iibhetri acid elikhokelayo: i elifutshane ixesha obhobhozayo, inowuthi amandla ezisebenzisekayo. Umzekelo: Ukuba ibhetri unako ukuhlangula Amps-10 iiyure 10, uya kusihlangula 100 Amps kuphela imizuzu 20-30. Kufuneka ukhethe ubukhulu ibhetri ukuze ixesha ukusebenza iiyure eziliqela nomthwalo wenu uqikelelo. Ukwengeza kufuneka ivumele obhobhozayo phantsi ku-60 ukuya kuma-70% lomthamo ngokupheleleyo ukuze kwandiswe ubomi bebhetri. Umzekelo: Lifetime kwebhetri inokuba 5000 umjikelo obhobhozayo nge-20% ukubhobhoza kumjikelo ngamnye. Ibhetri efanayo uya kuphila kuphela malunga 2000 imijikelo obhobhozayo ukuba wonke umjikelo yi-40% ekubhobhozeni.
Nceda ndwendwela ulwazi olungaphezulu: http://www.prostarpower.com/batteries
Q: YINTONI MALUNGA ibhetri iifyuzi?
iifyuzi Battery kufuneka zibekwe kufutshane kangangoko kunokwenzeka ukuba iibhetri ukuze kukhuselwe ibhetri intambo yonke. Kwimeko of cable mfutshane, ukuze yenzeke umlilo! Kufuneka angalinganiswa-25% ngaphezu draw amandla eliphezulu ekulindeleke ukusuka elunxwemeni bebhetri. iifyuzi DC rated kukho okuhle inverters.
Q: INDLELA ukukhetha iintambo Battery?
DC zangoku iintambo battery ibangela drop ombane ngokutsho Ohms umthetho V = R * 1. Njengoko isikhokelo jikelele: 1m of cable 25mm2 iye malunga ukungawi 0.001 Ohm. Eli xabiso liphindaphindwe iziphumo ibhetri ngoku kwithontsi ombane. Umzekelo: PRC 3000/24 ​​kunye nomthwalo ngegama, DC ngoku malunga 125Amps, 1.5m umgama ukusuka neebhetri, V = 2 * 1,5 * 125 * .001 = 0,38 volts, ubushushu ukusasaza kwi Cables 60Watts malunga! Esi sicelo kufuneka abe 35mm2 okanye 50mm2. Beka inverter ngokusondeleyo ukuya ibhetri njengoko kunokwenzeka. Sebenzisa inverters ne aphezulu ombane input ukuba kunokwenzeka. Uphakamile igalelo DC ixabiso le ngaphantsi ilahleko yangoku ukusuka intambo njengoko ngobuchule inyuswe.
Q: NJANI INVERTERS izakubanodibaniso ngaxeshanye?
Yima yedwa inverters: sithatha kunokwenzeka kuphela kwicala DC; emacaleni AC kusoloko kufuneka ukuba bodwa. Ungaze ukuqhagamshela lwa yakho imveliso inverter okanye qhagamshela kufayo ngaphandle ezimbini stand-alone inverters kunye, intshabalalo ngoko nangoko kuya kubangela.
Grid lweehagu inverters: sithatha kunokwenzeka kwicala AC. DC sithatha kungenakwenzeka ukususela MPP noun sele yenziwe inverter zonke kwi lentsimi yayo elanga.
Ezinye inverters kunjalo zenzelwe ukuba izakubanodibaniso ngaxeshanye kunye ezithile uxhulumaniso ekhethekileyo kwakuthetha ukuba frequency sokuGcina ungqamaniso kunye namandla Khawugxothe interconnections.
Jonga ukuba ezinye iimodeli Xantrex, wephimpi, kwaye Victron inverters ukufumana ulwazi oluthe vetshe.
Q: KUKHO ISIDINGO ilight UNGCELELE ZENTSIMI Solar?
Hayi! Iifyuzi for umtya ngamnye Iimodyuli elanga onele. Sebenzisa kabini umtya yangoku ukuze fuse. ama Series kuphela dissipaters ubushushu. Hi ndlela leyi, ilight ukufana ezimiliselwe iibhokisi aguguthe ezininzi iimodyuli elanga.
Q: Kutheni grid INVERTER KUFUNEKA UMHLABA Connection heavy (25mm2) intambo?
Umsebenzi ophambili intambo umhlaba uqhagamshelo ukhuseleko imibane, ukuphazamiseka ingcinezelo. Intsimi panel elanga isebenza eriyali leyo Sinakho ukuzidlulisa uphazamiseko okubangelwa nokutshintsha kumathambeka kwi inverter. Busebenze filter inbuilt iyasebenza kuphela uqhagamshelo olufanelekileyo emhlabeni.
Q: INDLELA INVERTERS KUNYE ezitsho EZAHLUKENEYO KUNYE / OKANYE yombane EZAHLUKENEYO GET?
Inkoliso inverters PROSTAR ziyafumaneka ukuze ezitsho ezahlukeneyo / yombane. Ezahlukeneyo uluhlu input ombane kuyenzeka. Cela nomphathi wendlela yakho malunga nokufumaneka xa udinga ukuba inverter okhethekileyo.
Q: Kutheni EZIZENZEKELAYO Layisha INGQIQO busebenze NOT ingqiqo imithwalo?
Kukho ezinye imida busebenze umthwalo wakuqonda. Ekubeni iisekethe umlinganiselo lwangaphakathi zisetyenziselwa iinjongo ezininzi ezahlukeneyo, loo eqaphela kwemithwalo ezincinane kakhulu kunokubangela ingxaki ngenxa inverter. Emigodini ze busebenze ingqiqo phezu lobushushu kunye ombane ingabangela ukuba aphile.
Ezinye izibane zamandla ukonga kuba cos phi embi kakhulu.
Ezinye imithwalo ziyazibhaqekela ngokuchanekileyo kodwa ukucima emva kwemizuzwana 10 ngenxa yokuba olusebenza ngoku lingaphantsi kwe inrush yangoku.
Amaxesha amaninzi ingxaki iyatyhilwa ngokusebenzisa uhlobo ezahlukeneyo, kwanezibane. Siza kuphucula umthwalo Ukuzibona kwisizukulwana esilandelayo inverters.
No.1 ShijieLang Road, Lianhe Industrial Zone West Zone Two, Luocun, Nanhai, Foshan, Guangdong, China
Sizamela ukunika abathengi kunye neemveliso ezisemgangathweni. Cela Ulwazi, Sample & Quote, Qhagamshelana us!
Okunye Language eKhaya